WINDOWS 10 KEYBOARD KAMWE KAMWE YAKAMIRA KUSHANDA? ISA MHINDURO IDZI KUTI UGADZIRISE - MITENGO
Windows 10 Keyboard Kamwe kamwe yakamira kushanda? Isa mhinduro idzi kuti ugadzirise
Dzimwe nguva unogona kutarisana nedambudziko keyboard kana mbeva isingashande kana kukanganiswa kana kusashanda mushe mushure meazvino windows 10 kugadzirisa. Kunyanya kana iwe wachinjira kuWindows 10 kubva kune yakura Windows 7 kana 8.1 Pane mikana yaungangosangana nedambudziko iri. Iwe hausi wega nedambudziko iri, Vazhinji vashandisi vanotaura nyaya iyi Microsoft foramu, iyo keyboard haisi kushanda mushure me Windows 10 1909 kugadzirisa kana mushure mekudzosera kumashure Windows 10 kune vhezheni yapfuura.
Zviri Mukati ratidza 1 keyboard haisi kushanda Windows 10 1.1 Dzima Filter Keys 1.2 Mhanya kiibhodhi chinetso 1.3 Dzorerazve Keyboard Mutyairi
Chikonzero chakajairika chedambudziko iri mutyairi wekhibhodi anogona kunge akaora kana kusingaenderane neyazvino windows vhezheni. Uye kuisa mutyairi wazvino wekhibhodi zvimwe mhinduro yakanaka yekugadzirisa dambudziko.
keyboard haisi kushanda Windows 10
Kana iwe urikurwawo nedambudziko rakafanana Keyboard isingashande mushure mekuvandudzwa kana Kamwe kamwe Kiyibhodhi yakamira kushanda paWindows 10 shandisa mhinduro pazasi.
Chekutanga cheki cheki, iyo keyboard yakabatana nemazvo,
Bvisa kabhodhi kubva kuchiteshi cheUSB uye chivharise mune imwe chiteshi che USB.
Zvakare kana zvichibvira kubatanidza iyo keyboard pane imwe komputa uye tarisa kana izvi zvichishanda, Kana zvisiri ipapo panogona kuve nedambudziko nekanyama khibhodi chete.
Sezvo keyboard yacho isinga shande paChigadzirwa chako inoita kuti utange iyo chaiyo keyboard (Pahwindo keyboard) paPC yako kuti uite matanho ekutambudza pazasi.
Kana zvese zviri zviviri keyboard uye mbeva zvikasashanda zvinokuudza kuti utange chishandiso ku Nzira yakachengeteka ine network, iyo inotakura iyo inoshanda sisitimu ine mashoma seti yevatyairi uye tarisa kana nyaya yacho ichiripo.
Dzima Filter Keys
Sefa Makiyi chinhu chakagadzirirwa kufuratira mabhatani mapfupi kana akadzokororwa, uye zvinoenderana nevashandisi, ino ficha yakavhurwa nekusarudzika pamalaptop avo, uye ndizvo zviri kukonzeresa nyaya yekhibhodi. Uye bvisa Filter Keys kuvabatsira kugadzirisa dambudziko.
Vhura control panel,
Dzvanya paEase of Access wobva wadzvanya 'Chinja mashandiro ekhibhodi yako.'
Pano Ita shuwa kuti Batidza Filter Keys sarudzo haina kuongororwa.
Mhanya kiibhodhi chinetso
Windows 10 ine seti yekuvaka-mumatambudziko ekugadzirisa izvo zvinogona kuona otomatiki uye kugadzirisa zvinhu zvakati wandei zvinotaurwa, Lets first run the keyboard diagnostic utility and let windows to check and kugadzirisa dambudziko racho roga.
Shandisa keyboard pfupi Windows + X uye sarudza marongero,
Iye zvino muWindows marongero ekutsvaga bhokisi mhando gadzirisa iyo keyboard uye sarudza tsvaga uye gadziridza matambudziko ekhibhodi,
Panguva ino tinya kumberi uye tarisa bhokisi rakanyorwa kuti gadzirisa otomatiki,
Dzvanya rinotevera uye uteedzere pamirayiridzo yechiratidziro iyo inoona uye kugadzirisa zvingangoitika nyaya nekhibhodi
Dzorerazve Keyboard Mutyairi
Yakawanda yenguva khibhodi inomira kushanda nekuda kwemutyairi usina kukwana, kukanganisa kana yechinyakare mutyairi. Saka, tinokurudzira kugadzirisa kana kudzorera ivo. Kune nzira dzakasiyana dzekuita izvi. Kune imwe chete, unogona kugadzirisa vatyairi vako kuburikidza neDhijitari Chidimbu Heano maitiro aungaite izvozvo:
Pane khibhodi yako, tinya Windows Key + x uye sarudza maneja wedhijitari,
Izvi zvichavhura maneja wedhizaini uye kuratidza zvese zvakaiswa dhairekitori yedhizaina,
Shandisa khibhodi, tinya-kurudyi pane yakaiswa keyboard mutyairi uye sarudza uninstall
Dzvanya ok Paunokurudzirwa kuti uve nechokwadi.
Paunenge wabvisa mutyairi wekhibhodi, tangazve PC yako. Ukangobhurawuza mukomputa yako zvakare, yako system inozoisa otomatiki iyo keyboard keyboard mutyairi, ichikubvumidza iwe kushandisa chishandiso pasina chero dambudziko.
Laptop haizoshanduke kunyange kana yaiswa mukati? Edza izvi mhinduro
Kugadziriswa: Gedhi rekumira harisi kuwanikwa paWindows 10, 8.1 na7
Kugadziriswa: Printer yakamira kushanda mushure windows 10 kugadzirisa
Gadzirisa iyo 'Yakakosha Maitiro Akafa' Stop Code 0x000000EF mu Windows 10
Maitiro ekugadzirisa USB madoko asiri kushanda mukati Windows 10 Laptop / PC
windows 10 kuwana zvigadziriso zvakanamatira pa0
yakanakisa siginecha font mushoko
windows 10 ipv6 hapana network yekuwana
windows 10 kugadzirisa ethernet isiri kushanda
windows 10 update inomira pa 99
windows tanga menyu yakakosha kukanganisa